डँडेलधुराका स्वास्थ्य चौकीको कन्तबिजोग « Drishti News – Nepalese News Portal
१२ माघ २०७७, सोमबार 8:40 am
डँडेलधुरा, १२ माघ । डँडेलधुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिमा मात्र नभई केन्द्रीय राजनीतिमा पनि विशेष महत्व राख्ने जिल्ला हो । डँडेलधुराबाटै निर्वाचित काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ४ पटक प्रधानमन्त्री बने । तर, उनै ४ पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको जिल्लामा विकास भनेको के हो ? भनेर सोध्नु पर्ने अवस्था छ ।
देउवाको गृह जिल्लामा अस्पतालको अवस्था त झन् नाजुक छ । त्यसमाथि गाउँगाउँमा खुलेका स्वास्थ्य चौकीको त कुरै नगरौं । स्वास्थ्य चौकीमा पानीसम्म हुँदैनभन्दा अचम्म लाग्ला । तर, डँडेलधुराको अमरगढी नगरपालिको विजोग यस्तै छ ।
तस्वीरमा देखिएको यो भूमिराज स्वास्थ्य चौकी । च्यातिएको र खुइलिएको यो बोर्ड नै काफी छ, यो स्वास्थ्य चौकीको अवस्था वर्णन गर्न । देश संघीयतामा गएको तीन वर्ष भइसक्यो । अझै पनि बोर्डमा भने सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय लेखिएको छ । ठूलो अक्षरमा लेखिएको नाम नै मेटिने अवस्थामा छ । हो, यही स्वास्थ्य चौकीको जीर्ण अवस्थाको चर्चा गरौं ।
सुरुमा यो शौचालय चर्चा गरौं । शौचालय छ तर पानी नै छैन । शौच गर्ने स्थानमा ढुंगा हालिएको छ । स्थापना भएको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि स्वास्थ्य चौकीको यो हविगत देख्दा कसैलाई मतलब नै छैन ।
नझुक्किनुस्, यो गोठ होइन । यो पनि स्वास्थ्य चौकीकै भवन हो । हालत कस्तो छ, देखिहाल्नु नै भयो । यही स्वास्थ्य चौकीमा सेवा लिन आउने सेवग्राहीले कति सास्ती भोगिरहेका होलान् । खानेपानी नहुँदा गर्भवती तथा अन्य बिरामी र कर्मचारीले भोग्नु परेको समस्याको त लेखा जोखा नै छैन ।
शुद्ध खानेपानी नहुँदा खोलाको दूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज श्याम बोहोराको गुनासो छ । स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीका लागि वडाले ५ लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यचौकीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रयास गरेपनि खानेपानीको मुहान नजिकका स्थानीयको असहयोगले सम्भव नभएको गुनासो वडाध्यक्ष भीम रोकायाको छ ।
खानेपानीको अभाव अन्त्य गर्ने जाँगर कसैलाई छैन । स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीको अभाव बाहेकको अवस्था यस्तो छ । तर, तयारी भने बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनको भइरहेको छ । जहाँ पानीको अभाव छ, त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनको कल्पना गरिन्छ !
विकास र समृद्धिका लागि ४ पटक प्रधानमन्त्री बनेका डँडेलधुराका छोरा शेरबहादुर देउवालाई त यस्तो समस्याका बारेमा पत्तो पनि छैन, होला । अनि कसरी हुन्छ विकास ? कसरी पाउँछ यो स्वास्थ्य चौकीले पुर्नजीवन ?